Amandla | I-Ningbo Horizon Magnetic Technologies Co., Ltd.
I-Ningbo Horizon Magnetic Technologies Co, Ltd. ingumkhiqizi ohlanganiswe mpo womazibuthe womhlaba ongavamile weNeodymium kanye nemihlangano yawo kazibuthe ehlobene nayo. Singayenza lula inqubo yakho yephrojekthi futhi sikusize ekwakheni umkhiqizo omusha kusuka kumbono kuze kufike ekulethweni.
Ukukhiqizwa Kwe-Magnet Neodymium
Ukukhiqizwa kukazibuthe weNeodymium kuyitshe legumbi lecebo le-Horizon Magnetics lokuqinisekisa ukutholakala okuzinzile nokuqhubekayo kwamazibuthe wekhwalithi ephezulu kanye nezinhlelo zikazibuthe ikakhulukazi ngesikhathi esikhethekile, ngokwesibonelo, ukukhuphuka kwamanani entengo nokutholakalela kwezinto zomhlaba ezingandile. Umthamo wokukhiqiza osezingeni eliphakathi nendawo, amathani angama-500 odonsa u-Neodymium alawulwa ngokuqinile ngaphandle kokukhulisa umthamo kepha ukwenziwa ngcono kokuphathwa ukuze kuhlangatshezwane nezidingo eziqinile zamakhasimende ethu.
Sithanda inselelo futhi sinentshisekelo kuzixazululo ezenziwe ngozibuthe ukufeza imisebenzi ehlukile yamakhasimende. Ulwazi lwethu lobuchwepheshe kumazibuthe nokuhlangenwe nakho okwanele kumasistimu kazibuthe womhlaba ongajwayelekile we-Neodymium kusenza sikwazi ukunikeza amakhasimende izincomo ezisebenzayo noma insiza yokwakha kusuka esigabeni somqondo kuya ekugcwalisekeni kokugcina komkhiqizo. Ngaphezu kwalokho, insizakalo yobunjiniyela ebuyiselayo iyatholakala ukusiza amakhasimende ukuthi athuthukise imiklamo ekhona.
Ukwenziwa kwendlu ngaphakathi kanye neMachining
Uhla lwethu olubanzi lwe-state-of-art machining Equipments lwenza isikhathi sokulethwa kanye nekhwalithi ye-magnet block machining kanye nengxenye yensimbi eqamba ukulawulwa. Ingahlangabezana nemfuneko ekhethekile yamakhasimende njengobungako obuncane, ukubekezelelana okuqinile, ukulethwa okuphuthumayo, izinqubo eziyinkimbinkimbi, njll. Ngokukhethekile kumkhiqizo omusha, amandla endlu angakhiqiza isibonelo ngesikhathi sokusheshisa inqubo yentuthuko nokulawula izimfihlo zokudala imikhiqizo emisha iyimfihlo.
Njengomhlinzeki othembekile kazibuthe womhlaba, i-Horizon Magnetics ilwela ukuthola izinga eliphakeme kakhulu ukwanelisa izidingo zamakhasimende ngokwenza ngcono okuqhubekayo. Izinsizakusebenza zokuhlola ezithuthukisiwe zivumela ukuhlolwa okusheshayo nokunembile kokuphambuka kukazibuthe nokuphambuka kwe-engeli ukuqinisekisa wonke uzibuthe wevolumu ephezulu ehambelana nemfuneko yekhwalithi enesici esingelona iphutha lezicelo eziqinile ezifana nezemoto. Omazibuthe bethu bomhlaba abangavamile nemihlangano emikhulu ukuhambisana kweRoHS ne-REACH.
Ukunikezelwa kwe-One-Stop for Imikhiqizo Magnet Ebanzi
Izinhlobo nosayizi wemikhandlu engabizi kakhulu ye-Neodymium kazibuthe efana nomazibuthe bokudoba, ozibuthe bokuvala, odonsa bembiza, ozibuthe bamahhuku nabaziboni basehhovisi bayatholakala esitokweni sokulethwa okusheshayo. Ukukhiqizwa kukamazibuthe we-Neodymium nokwenziwa ngaphakathi endlini kungenza ngezifiso izinhlelo ezahlukahlukene zemvelo zemagnethi uma kuceliwe. Ubungcweti kuzibuthe busivumela ukuthi sikhiphe ezinye izinto zikazibuthe zaphakade ezinamanani amancane kepha kunesidingo esidingekayo sokuhlanganisa ukuthunyelwa okukodwa kalula.